Soosaarka Qaybaha Acoustic Shiinaha & Warshad | Hongshida
Isku-darka N: 100% xayawaan (60% dib loo warshadeeyay)
1. boodhka cadeynta dhawaaqa waa qaab casriyeysan oo casriyeysan. Waxay u kala saari kartaa booska si dhakhso leh oo ku habboon. Oo waxay leedahay kuleyliyaha dhawaaqa iyo kuleylka kuleylka iyo shaqada dabka;
2. Ku Qaybaha Acoustic Board waxaa laga sameeyey cufnaanta sare s / s jir, caag sameeyey gaar ah, suuf ningax codka aad u fiican iyo guddiga dhammeeyo iwm guddiga dhamaadka waa flat iyo adag;
3. Guddiga dhammeeya waxaa lagu dhejiyaa wadada aluminium, oo lagu soo ururiyey giraangiraha jihada badan; guddiga ayaa lagu keydin karaa siyaabo kala duwan;
4. Uma baahna raad raac dabaqa ah, waxaan kaliya sudhnaa wadada saqafyada waxayna ku jiri kartaa isla diyaarad qurxinta saqafka. Saamayn kuma yeelan doonto qaabka qurxinta oo dhan;
5. Looxyada dushiisa, waxaa jira caag dahaadhka dhawaaqa, wuxuu kaa caawin karaa inuu dahaadho dhawaaqa soo galaya;
6. Hababka hawlgalku aad ayey uga fudud yihiin, way ka wanaagsan yihiin qaababkii hore ee guga hore loo isticmaali jiray;
7. Waxaan ku dari karnaa albaabo hal ama labo alwaax ah sabuuradda;
8. Waxaan leenahay dhameystir badan oo kala duwan si aan ula kulanno macaamilka shuruudo kala duwan oo aan u helno saameyn qurxin kala duwan.
Waxaan soo saarnaa noocyo badan oo badeecooyin acoustic ah iyo qaybin acoustic. Our warshad daboolayaa aag ka badan 10000 mitir murabac ah oo maray ISO9001: 2008 Shahaadada Tayada Caalamiga ah, Shahaadada GRS. Oo ay ku jiraan warbixino badan oo tijaabo xirfadeed ah: Warbixinta qaran ee dabka lagu qiimeeyo, warbixinta baaritaanka ilaalinta deegaanka, warbixinta baaritaanka dhuuqista codka, iwm., In ka badan 30 nooc oo alaab ah oo wadarta guud ku lug leh.
Waxaan haynaa gabi ahaan mashiinno kumbuyuutar si otomaatig ah loo kontoroolo iyo shaqaale xirfadlayaal farsamo ah si loo hubiyo in badeecadeennu ay tayo sare leedahay. Wax soo saarkeenna badeecadaha loo adeegsado looma baahna in ka badan 400000 mitir murabac ah sanadkii iyo soo saarkeenna nidaamyada kala-guur ee la dhaqaajin karo waa in ka badan 40000 mitir murabac sanadkii. In kabadan 35% ee waxsoosaarkeena waxaa loo dhoofiyaa macaamiisha aduunka oo idil. Ku soo dhowow inaad soo booqato warshaddeena si aan u dhisno xiriir iskaashi muddo dheer ah.
Hore: Gudiga Acoustic Wall
Qeybinta Acoustic Folding
Darbiyada Qaybta Acoustic Folding
Qaybta Acoustic Glass
Qaybaha Xafiiska Acoustic
Gudiga Barxada Acoustic
Qaybaha Qaybaha Acoustic
Qeybinta Laabashada Muuqashada Acoustic